Oggolaanshaha Hore ee Dhaqanka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore > Oggolaanshaha Hore ee Dhaqanka
Oggolaanshaha Hore ee Dhaqanka
Helitaanka foomamka la xiriira oggolaanshaha hore ee caafimaadka dhaqanka.
Daaweynta arrimaha caafimaadka hab dhaqanka waxay u baahan kartaa oggolaansho hore ama ogeysiin. Xubnaha waxay u baahan doonaan gudbin loogu talagalay adeegyada maareynta daryeelka degdegga ah ee barnaamijyada bukaan-socodka ee xoogga badan. Qiimeynta bilowga ah iyo bukaan socodka iyo gudbinta waxaa lagu sameeyaa kiisba kiis.
Dhammaan adeegyada uu bixiyo adeeg bixiye aan qandaraas haysan ayaa u baahan Oggolaansho Hore.
➔ Tilmaamaha Adeegsiga Caafimaadka Habdhaqanka 2021.
Adeegyada Degdega ah Uma Baahan Oggolaansho Hore
Adeegyada deg-degga ah ee loogu talagalay caafimaadka hab-dhaqanka waxaa lagu qeexay habka soo socda.
Adeegyada Bukaan-jiifka Isbitaalka Bukaannada Maskaxda & Isticmaalka Maandooriyaha (SUD)
Adeeg kasta oo xarun ku saleysan oo bixiya 24 saacadood / maalintii iyo adeegyo 7 maalmood / usbuuc ah.
Barnaamijyada Bukaan-socodka ee Cufnaanta Sare
Dhamaan daaweynta bukaan socodka iyo bukaan socodka bukaan socodka ee daaweynta bukaanka Medicare waxay ubaahantahay ogolaansho hore.
Dhammaan koodhadhka aan diiwaangashanayn ee leh lacag ka badan $ 500 waxay u baahan yihiin oggolaansho hore
Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Bukaan-jiifka la xusho (Daryeelka Isku-dhafan ee Isku-dhafan / BHSO)
Tijaabinta cilmu-nafsiga iyo cilmu-nafsiga waxay u baahan tahay oggolaansho hore.
C Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (oo ay ku jiraan taariikhda oggolaanshaha ugu dambeeya iyo soo koobista isbeddelka)